भ्यु टावरको कथा के हो ? • Nepal's Trusted Digital Newspaperभ्यु टावरको कथा के हो ? • Nepal's Trusted Digital Newspaper
भ्यु टावरको कथा के हो ?
‘भ्यु टावर’ उद्घाटन गर्ने नाममा चुनावको छेको पारेर नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सोमबार रोल्पा पुगे । चुनावी माहौलको साइत जुराएर ७ वर्षपछि रोल्पा पुगेका प्रचण्डले रोल्पा नगरपालिकामा ‘जनयुद्ध स्मृति’ नाम दिइएको ‘भ्यु टावर’ उद्घाटन गरे ।
करिब ६ करोड रुपैयाँ खर्चेर बनाइएको उक्त टावरमा माओवादी सशस्त्र संघर्षको झल्को दिनेगरी ‘जनमुक्ति सेना’का सालिक पनि राखिएका छन् ।
मंगलबार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि भ्यु टावर उद्घाटन गर्न रुपन्देही पुगे । रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका पुगेर ओलीले १ सय ३४ फिट अग्लो भ्यु टावर उद्घाटन गरे । व्यावसायिक भवनका रूपमा पनि प्रयोग गर्न मिल्ने १० तले यो टावर बनाउन नगरपालिकाले साढे ११ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ ।
करोडौँ लगानी गरेर निर्माण गरिएका यस्ता भ्यु टावरहरू पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि बनाइएको दाबी गरिन्छ । पर्यटन प्रवर्द्धनका नाममा भ्यु टावर निर्माण बढेपछि ९ चैतमा शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले भ्यु टावर निर्माणका लागि संघीय सरकारले बजेट नदिने घोषणा नै गरिन् ।
लहडी विकासको नमुना बनेको भन्दै भ्यु टावरको चर्को आलोचना पनि हुने गरेको छ । तर, देशभरका अधिकांश स्थानीय सरकारले भ्यु टावर बनाएका छन् । पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने नाममा बनाइएका यी भ्यु टावरले पर्यटकलाई आकर्षित गर्नुको सट्टा विकर्षित गरेको पर्यटन बोर्डले बताएको थियो ।
१ फागुन २०७८ मा पर्यटन बोर्डले त्रिभुवन विश्वविद्यालय अल्मुनाई एसोसिएसनसँग छलफल गर्दै यस्ता भ्यु टावर नबनाउन आग्रह नै गरेको थियो । पर्यटकीय स्थानलाई कुरुप देखाउने गरी बनाइने यी कंक्रिट टावर अनुत्पादक भएको बोर्डको निष्कर्ष थियो ।
तर, भ्यु टावरको लत लागेका स्थानीय र प्रदेश सरकारले कसैको कुरा सुनेनन् । पूर्वी नेपालको प्रसिद्ध पर्यटकीय गन्तव्य मानिने भोजपुरको टेम्के डाँडामा १३ करोड रुपैयाँ लगानी गरेर प्रदेश १ सरकारले टावर बनायो । टावरको शिलान्यास गर्न तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राई टेम्के डाँडा पुगे ।
उदयपुरको लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाले सगरमाथा हेर्ने भन्दै भ्यु टावर बनायो । ‘एभरेस्ट भ्यु टावर’ नाम दिँदै गाउँपालिकाले करोडौँ बजेट खन्यायो । सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिकाले त रुखमै फलामे भ्यु टावर बनायो । स्थानीय सरकारले भ्यु टावर विकास अभियान चलाउन थालेपछि प्रदेश सरकारले पनि त्यसैको सिको गरे ।
बागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा काठमाडौं उपत्यकाबाहेकका १० जिल्लामा ‘एक हिल स्टेसन, एक भ्यु टावर’ निर्माण गर्न ६ करोड रुपैयाँ छुट्यायो । अघिल्लो वर्ष पनि मन्त्रालयले ५ करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो ।
भ्यु टावरको सोच नै आफूले नेपाल भित्र्याएको दाबी गर्ने एमाले अध्यक्ष ओली केपी शर्मा ओलीले गृह जिल्ला झापाकाे दमक नगरपालिकामा भ्यु टावर बनाउने योजना केन्द्र सरकारबाट पठाए । आफैँ भ्यु टावर कहलिने नेपाली डाँडामा पनि स्थानीय सरकारले भ्यु टावर बनाउन बाँकी राखेनन् । समुद्री सतहदेखि २४ सय मिटर अग्लो म्याग्दीको मंगला गाउँपालिकाको झाँक्रीपानीमा ३५ फिट अग्लो भ्यु टावर बनाइयो ।
देशभरका अधिकांश स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारले विभिन्न बहानामा भ्यु टावर बनाएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले पहाडैपहाड भएको मुलुकमा भ्यु टावर बनाउनु हावादारी काम भएको टिप्पणी गरेका थिए । ९ पुस २०७८ मा भट्टराईले ‘पहाड नै हाम्रो भ्यु टावर हो,’ उल्लेख गर्दै भनेका थिए, ‘भ्यु टावर बनाउनु अज्ञानताको पराकाष्ठा हो, जनता पनि नबुझीकन विकास भनेकै भ्यु टावर भन्छन् । नेताहरूले यस्तो हावादारी कुरा गर्ने हो ?’
तर, अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री ओली भने भ्यु टावरको सोच आफूले नै बनाएको दाबी गर्दै भ्यु टावर संस्कृतिको प्रशंसा गर्छन् । ‘एमालेको सरकार बन्दैनथ्यो भने यतिको भ्यु टावर बनाउने र यहाँ लिफ्ट राख्ने सोच साधारणयता भन्ने हो भने आउने थिएन,’ ओली भन्छन् ।
तर, पूर्वाधार विकासका जानकारहरू भने स्थानीय सरकारले हचुवाका भरमा भ्यु टावर बनाएको बताउँछन् । शहरी विकास मन्त्रालयका पूर्वसचिव तथा पूर्वधार मामिलाका जानकार किशोर थापा अग्ला डाँडामा भ्यु टावर बनाएर डाँडाको सौन्दर्य झनै बिग्रिएको बताउँछन् । अहिले बनाएजति सबै ठाउँमा भ्यु टावर नचाहिने उनको भनाइ छ । ‘अहिले जसरी छ्याप्छ्याप्ती भ्यु टावर चाहिँदैनन्,’ थापा भन्छन्, ‘प्राविधिक अध्ययन नगरी, हचुवाको भरमा जहाँ पायो त्यहीँ टावर चाहिँदैन ।’
योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्री भ्यु टावरलाई सरकारले गरेको फजुल खर्च भन्छन् । पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि नेपालमा भ्यु टावर नचाहिने उनको तर्क छ । भन्छन्, ‘पर्यटन विकासका लागि हाम्रो मुलुकमा भ्यु टावर चाहिँदैन । यो निकै अनुत्पादक र फजुल लगानी हाे ।’
सस्तो लोकप्रियताका लागि स्थानीय सरकारले भ्यु टावरमा लगानी गरेको उनको बुझाइ छ । ‘विकासको नयाँ परिचायक भएको छ, भ्यु टावर,’ क्षेत्री भन्छन्, ‘सस्तो लोकप्रियताका खातिर यस्ता काम भइरहेका छन् ।’
भ्यु टावर निर्माण गरेर स्थानीय सरकारले आफ्नो बजेट आफैँ खर्चिन पाउने प्रावधानको दुरुपयोग गरेको क्षेत्री ठान्छन् । पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल नेपाल सर्वाधिक भ्यु टावर भएको देशमा गनिन बेर छैन भन्दै व्यंग्य कस्छन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उनी लेख्छन्, ‘नेपाल सायद संसारमा सबैभन्दा बढी भ्यु टावर भएको देशको रूपमा पनि चिनिन बेर छैन ।’